ပင်မစာမျက်နှာ » နိုင်ငံတကာသတင်းများ » ဂျော်ဂျီယာ Breaking News
အမျိုးအစား - ဂျော်ဂျီယာ Breaking News
visitors ည့်သည်များအတွက် Georgia Travel & Tourism News ဂျော်ဂျီယာသည်ဥရောပနှင့်အာရှလမ်းဆုံတွင်တည်ရှိသောနိုင်ငံဖြစ်ပြီးကော့ကေးဆပ်တောင်တန်းများနှင့်ပင်လယ်နက်ကမ်းခြေများရှိသည့်ဆိုဗီယက်သမ္မတနိုင်ငံဖြစ်သည်။ ၎င်းသည် ၁၂ ရာစုမှဖြန့်ကျက်နေသောပုန်းကွယ်နေသောဂူဘုန်းကြီးကျောင်းနှင့်ရှေးခေတ်ဝိုင်စိုက်ပျိုးထုတ်လုပ်သည့်ကက္ခီးတီတို့၏ကျော်ကြားမှုဖြစ်သည်။ မြို့တော် Tbilisi သည်မတူကွဲပြားသောဗိသုကာနှင့်ထင်ရှားကျော်ကြားသောမြို့ဟောင်း၏ကျောက်တုံးကျောက်တုံးများဖြင့်ကျော်ကြားသည်။
ဂျော်ဂျီယာစစ်တုရင်ကြယ်ပွင့်သည်သူမအားရုရှဟုခေါ်သော Netflix အားတရားစွဲသည်
Netflix သည် Gaprindashvili ၏စျေးသက်သက်သာသာနှင့်အောင်မြင်မှုများအကြောင်းပြောင်ပြောင်တင်းတင်းနှင့်တမင်တကာလိမ်ညာခဲ့သည်။
ဂျော်ဂျီယာသည် LGBTQ အတွက် dangerous ည့်သည်တော်များအတွက်အန္တရာယ်ရှိသည်။
ခရီးသွားလုပ်ငန်းဆိုသည်မှာငြိမ်းချမ်းရေး၊ ကမ္ဘာလုံးဆိုင်ရာနားလည်မှုနှင့်အခြားယဉ်ကျေးမှုများကိုစူးစမ်းခြင်းဖြစ်သည်။ တန်းတူညီမျှမှုကိုဆိုလိုသည်။
Air Astana သည်ဂျော်ဂျီယာသို့တိုက်ရိုက်ပျံသန်းမှုများပြန်လည်စတင်
UNWTO သည်ဘာရိန်းအားမလေးမစားပြုခြင်းသည် JIU ကိုချိုးဖောက်ခြင်းဖြစ်သည်။
UNWTO အတွင်းရေးမှူးချုပ် Zurab Pololikashvili အပေါ်အရှက်ကွဲခြင်း
၈ UNWTO အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးရွေးကောက်ပွဲအတွက်ကိုယ်စားလှယ်လောင်းများ
တစ်နေ့လျှင် COVID-1000 ဖြစ်ပွားမှုအသစ် ၁၀၀၀ ဖြင့်ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံသို့ပြောင်းရွေ့ ...
UNWTO ၏လူမှုရေးအကွာအဝေးမူဝါဒနှင့်မျက်နှာဖုံးများသည်ကြီးမားသော NO ဖြစ်သည်
UNWTO ၏အချက်အလက်အသစ်များအရခရီးသွား ၀ င်ရောက်မှုကို ၉၃% လျှော့ချသည်
UNWTO ၏စီမံခန့်ခွဲမှု ...
ကုလသမဂ္ဂမှမည်သည့်ကုလမျှမျှတတတောင်းဆိုရန်ကို UNWTO ကတားဆီးနေသနည်း။
ဂျော်ဂျီယာနိုင်ငံသည်နိုင်ငံခြားသား visitors ည့်သည်များကို ၀ င်ခွင့်မပြုရန်တားမြစ်ထားသည်
တူရကီမှ Pegasus လေကြောင်းလိုင်းသည်မက်ဒီနာသို့ပျံသန်းမှုစတင်
ဂျော်ဂျီယာလေကြောင်းလိုင်းကရုရှားကိုဒေါ်လာ ၂၅ သန်းဖြင့်တရားစွဲ
ဂျော်ဂျီယာ ၀ န်ကြီးချုပ်မှ ...
ရုရှားခရီးသွားလုပ်ငန်းအရာရှိ၊ လေကြောင်းလိုင်းများပြန်လည်ထူထောင်ခြင်း၏အခွင့်အလမ်းများ ...
ဂျော်ဂျီယာ ၀ န်ကြီးချုပ်ဂျော်ဂျီယာဝန်ကြီးချုပ်ရုရှားနှင့်ဆွေးနွေးခြင်း
ဂျော်ဂျီယာလေကြောင်းလိုင်း - ရုရှားလေယာဉ်ခရီးစဉ်ပိတ်ပင်မှုဒေါ်လာ ၂၅ သန်းကုန်ကျသည်။
ဂျော်ဂျီယာခရီးသွားလုပ်ငန်းအရာရှိ: ရုရှားက ၆၀ ရာနှုန်းကိုဖျက်သိမ်း
ဂျော်ဂျီယာ၏ခရီးသွားလုပ်ငန်းအကြီးအကဲ၊ ရုရှားဆုံးရှုံးမှု ...
ဂျော်ဂျီယာ ၀ န်ကြီးချုပ်ဂျော်ဂျီယာသည်နိုင်ငံခြားအတွက်လုံခြုံသည်
ဘူဒါပက်စ်လေဆိပ်သည်ဆောင်းရာသီအားဂျော်ဂျီယာ Myway နှင့်ကြိုဆိုသည်။
ဂျော်ဂျီယာကိုဘယ်တော့မှမသွားသင့်တဲ့အကြောင်းအရင်း (၇) ချက်
ဂျော်ဂျီယာခရီးသွားလုပ်ငန်းသည်စစ်မှန်။ ရှာဖွေတွေ့ရှိသော AI ကိုစတင်ခဲ့သည်။
၀ န်ကြီးချုပ်အီရန်နှင့်ဂျော်ဂျီယာတို့ဘဏ်စာရင်းကိုပေါင်းစည်းသင့်ကြောင်း ...
UNWTO ၏လက်ထောက်အတွင်းရေးမှူးအသစ်၊ သူမည်သို့ရရှိခဲ့သနည်း။
ဂျော်ဂျီယာလေကြောင်းလိုင်းများကိုဂျော်ဂျီယာနှင့်ဆက်သွယ်သည့် Tbilis သို့ Cologne သို့
Tbilisi တွင်မျက်နှာကျက်။ ခရီးသည် ၁၄ ဦး ဒဏ်ရာရ
ဂျော်ဂျီယာကခြိမ်းခြောက်နေသောသတင်းထောက်သည် UNWTO သို့သတင်းစကားပို့သည်
ဂျက်ဖရီလစ်မန်:“ ဟုတ်တယ်” သို့မဟုတ်“ မဟုတ်ဘူး” ...
ဂျော်ဂျီယာစာနယ်ဇင်းသမားသည် UNWTO မှအမည်စာရင်းတင်သွင်းသူ Zurab ကိုမည်သို့မြင်သနည်း။
UNWTO အတွင်းရေးမှူးချုပ် - ဟဲဗီးဝိတ်နှင့်ပေါ့ပါးမှု
အကူအညီလိုအပ်သည်! UNWTO အတွင်းရေးမှူးချုပ် - မရှိ ...
UNWTO အတွင်းရေးမှူးအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ: ဂျော်ဂျီယာသည်နှစ်ဆတိုး
Air Georgian Limited နှင့်အတူပျံသန်းမည့်စင်တာ
မက်ဒရစ်တွင်တစ်စုံတစ်ရာပုပ်စပ်နေသည်။ UNWTO ၏ရွေးကောက်ပွဲကော်မရှင် ...
UNWTO အထွေထွေဆွေးနွေးပွဲတွင်မည်သူကိုဖိတ်ကြားခြင်းမရှိပါ ...
UNWTO အထွေထွေအတွင်းရေးမှူးအသစ်ကလိုလားသော quo ကိစ္စများအား ...
UNWTO အတွင်းရေးမှူးအထွေထွေရွေးကောက်ပွဲ -“ နောက်ထပ်မျှော်လင့်ပါတယ်။
အဘယ်ကြောင့် UNWTO အထွေထွေညီလာခံကိုစောင့်ဆိုင်း? အတွင်းရေးမှူးအသစ် ...
S7 လေကြောင်းလိုင်းသည် Novosibirsk မှ Tbilisi သို့စတင်ပျံသန်းခဲ့သည်
အရည်အချင်းပြည့်မီလား။ အဆိုတော်လား လိမ်လည်မှု? … eTN စာဖတ်သူများအပေါ်…
ဂျော်ဂျီယာအနိုင်ရ - UNWTO မှ Zurab Pololikashvili ကိုရွေးကောက်တင်မြှောက်သည်။